ITALIAN DANIFF RUZIVO UYE MIFANANIDZO - IMBWA
Italian Daniff Ruzivo uye Mifananidzo
Cane Corso Italiano / Huru Dane Akasanganiswa Mhando Dzembwa
'Apollo chizvarwa chekutanga chiDaniff. Baba vake vaive hombe kupwanya Cane Corso uye mai vake vaiva dema Great Dane . Tamuwana kubva anga aine masvondo masere ekuberekwa. Ane hunhu hunoshamisa. Anoda kutaura, uye ave achishamisa imbwa yekutarisa . Iye chete sired tsvina ye 3/4 Great Dane uye 1/4 Cane Corso mbwanana. '
Italian Daniff haisi imbwa yakachena. Muchinjikwa pakati pe Italian Cane Corso uye iyo Great Dane . Nzira yakanakisa yekuziva hunhu hwesanganiswa yakavhenganiswa ndeyekutarisa mhando dzese mumuchinjikwa uye uzive kuti iwe unogona kuwana chero musanganiswa wechero hunhu hunowanikwa mune chero rudzi. Haasi ese eaya akagadzika imbwa dzakauchikwa dziri kuberekwa dziri 50% dzakachena kusvika ku50% dzakachena. Zvakajairika kuti vafudzi vaberekane mizhinji-chizvarwa michinjikwa .
Apollo chizvarwa chekutanga Italian Daniff (brindle Cane Corso baba uye vatema mai Great Dane) pamwedzi gumi nesere.
mifananidzo ye yorkie maltese musanganiswa
Apollo's sired litter yeF1b 3/4 Great Dane uye 1/4 Cane Corso mbwanana.
Apollo's sired F1b 3/4 Great Dane uye 1/4 Cane Corso puppy.
Marley the Great Dane / Cane Corso sanganisa rudzi sembwanana- 'Marley imbwa inoda-kunakidza, yakapfava, imbwa yakanyarara. Anoda kutamba naye dzimwe imbwa , anoshamwaridzana zvakanyanya, anowirirana nembwa dzese uye munhu waanosangana naye. Iye aifanirwa kuve wedu imbwa yekuchengetedza asi ine hushamwari kune wese munhu, kunyange ichizopa yambiro kuhukura kuvanhu iye haazive, asi inopfuura nekukurumidza ... muswe wags uye anoda kupa kutsvoda. Zvakare zvine hungwaru. Kufamba kwakanyanya kwakambomuwana. Hatidi kumurega iye nekuda kwewolf. '
Marley the Great Dane / Cane Corso musanganiswa unobereka sembwanana.
American pitbull american bulldog musanganiswa
Chinyorwa cheGreat Dane Sanganisa Mhando Dzembwa
Chinyorwa cheCane Corso Italiano Sanganisa Inobereka Imbwa
Dzakawedzera Imbwa Huru
runyorwa rwembwa dzese dziri pasi
yero uye nhema dhi musanganiswa
Rhodesian ridgeback labrador retriever musanganiswa
pomeranian uye bichon frize musanganiswa
Mwedzi 4 wekare labrador retriever
imbwa hadzi dzinowirirana nedzimwe imbwa hadzi